Wadahadalka Cusbooneysiinta ee CET - Xarunta EcoTechnology
Sannad kasta, Xarunta EcoTechnology (CET) waxay dejisaa yoolal himilo leh si loo beddelo habka aan u nool nahay iyo shaqada; iyo in la horumariyo bulshada, dhaqaalaha, iyo deegaanka. Waxaan irbadda ku wareejineynaa dadaallada tijaabada ah ee hal abuurka leh, oo ay ku jiraan mashaariicda yaraynta kaarboonka maxalliga ah, kala-goynta, yareynta culeyska ugu sarreeya, dib-u-dhiska iyo waxyaabo kale oo badan!
Sannadkii 2020, CET waxay yareeysay qiiqa u dhigma qaadashada 35,000 baabuur waddada muddo hal sano ah, waxay keydisay tamar ku filan oo ay ku maamusho 7,500 oo guri muddo sannad ah, waxayna yareysey qashin ku filan oo ay ku buuxiso 6,000 qashin. Saameyntani waxay u abuurtay in ka badan $ 14,000,000 keyd noloshooda dadka deegaanka iyo ganacsatada. Waxaa naga go'an inaan helno oo aan hirgalinno xalal cusub si dadka iyo ganacsatadaba looga caawiyo keydinta tamarta loona yareeyo qashinka in ka badan 45 sano waxaanna leenahay shaqo badan oo xiiso leh mustaqbalka.
Si aan ugu dabaaldegno sannad-guurada 51aad ee Maalinta Dhulka, waxaan la fadhiisannay Agaasimaha CET ee Innovation, Ashley Muspratt, iyo mid ka mid ah Khabiirradeena Deegaanka, Karen Franczyk. Waxaan ka wada hadalnay muhiimadda ay leedahay xal u helidda cuntada luminta, goynta dekedda, waxtarka tamarta, iyo waxyaabo kale oo badan. Wadahadalku wuxuu diirada lagu saaray howlaha firfircoon ee ay CET qorshaysay mustaqbalka iyo waliba mashaariic dhowaan xiiso laheyd. Hadaad seegtay hoos ka daawo duubista.
CET ayaa caawisa dadka iyo ganacsiyada keydso tamarta oo yaree qashinka. Kuweena Waxqabadka Sare kooxdu waxay ka shaqeysaa inay ka caawiso dhismaha iyo naqshadeynta xirfadleyda qaabeynta iyo dhisida guryaha iyo dhismayaasha qoysaska badan. Nagala soo xiriir 413-586-7350 ama nala soo xiriir halkan.
Marabtaa inaad sii yareyso saameyntaada? U dukaamee qalabka dhismaha ee dib loo soo ceshaday at Gorgortanka EcoBuilding, dukaanka alaabada dhismaha ee ugu weyn ee dib loo soo celiyo iyo kuwa dheeraadka ah ee kuyaala New England. Gorgortanka EcoBuilding waxay aqbashaa tabarucaad noocyo kala duwan oo tayo leh oo ah hagaajinta guryaha waxayna ku iibisaa qiimo jaban dadweynaha. Tani waxay leexisaa qashinka qashinka waxayna siisaa waxyaabo badan oo qurux badan nolol labaad.
Marabtaa inaad waxbadan qabato si aad ugu dabaaldegto Maalinta Dhulka? Akhriso kaayaga 10 Ways oo Loo Dabaaldego Maalinta Dunida blog si aad wax badan uga barato siyaabaha aad ku noqon karto mid waara maalin kasta! Halkan hoose ka daawo Muuqaalkeena Saameynta Howlgalka ee 2020 si aad waxbadan uga barato shaqadii ay qabatay CET sanadkii lasoo dhaafay.